आईपीएलकाे फाइनल खेल आज, कसले जित्ला उपाधि ? - Nepal's Digital News Paper
आईपीएलकाे फाइनल खेल आज, कसले जित्ला उपाधि ?
काठमाडौं । इंन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिको अन्तिम जतिजा आज आउँदैछ ।
१२औं संस्करणको आईपीएलको उपाधिका लागि आज साविक विजेता चेन्नाई सुपर किंग्स र मुम्बई इन्डियन्सबीच ७ बजेर ४५ मिनेटमा हैदरावादमा फाइनल खेल हुँदैछ ।
तुलनात्मक रुपमा फाइनल भिड्दै गरेको दुई टिममध्ये जारी आईपीएलमा चेन्नाई भन्दा मुम्बईले बलियो खेल प्रदर्शन गरिसकेको छ । मुम्बई र चेन्नाईले जारी आईपीएलमा तीन खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेको छ । तीनै खेलमा मुम्बईले चेन्नाईलाई पराजित गरेको छ ।
लिग चरणको पहिलो होम खेलमा मुम्बईले चेन्नाईलाई ३७ रनले पराजित गरेको थियो । अघिल्लो खेलमा पनि मुम्बईले चेन्नाईलाई ४६ रनले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै, क्वालिफायरको पहिलो राउण्डमा मुम्बईले चेन्नाईलाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो ।